Al-Shabaab oo markii ugu horreysay ka hadashay Xil ka qaadistii RW Kheyre | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Al-Shabaab oo markii ugu horreysay ka hadashay Xil ka qaadistii RW Kheyre
Muqdisho (Halqaran.com) – Warbaahinta ku hadasha Afka Ururka Al-Shabaab ayaa baahisay cod maqal ah oo laga soo duubay Afhayeenka guud ee Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage, kaasi oo uu kaga hadlay xaaladda guud ee dalka, sidoo kalena ka hadlay Ciida.
Afhayeenka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage ayaa ku sheegay sababta ay isku Khilaafeen Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali khayre inay tahay waxa uu ugu yeeray la dagaalanka Diinta Alle.
Cali Dheere ayaa sheegay dad kasta oo ku heshiiya sida uu yiri la dagaalanka Diinta Alle inay si fashil ah ku kala tagayaan.
“La dagaalanka Diinta Allaah oo ay heshiis ku ahaayeen kama dheefin wax aan is khilaaf iyo kala carar aheyn, wax badan bulshada u sheegayeen dad dalkooda u daneynaya maanta waxay la soo baxeen wajigooda dhabta ahaa, waana la daawanayaa sida midba midka kale u eedeynayo inuu danihiisa gaarka fushanaya, badankood baasaboor shisheeye ayay wataan, nin walba tikidkii uu ku dhoofi lahaa jeebka ayuu ku heystaa si uu dib ugu laabto halkii uu ka yimid.” Ayuu yiri Cali Dheere.
Sidoo kale, afhayeenka Ururka Al-Shabaab ayaa ka hadlay duqeymaha Diyaaradaha Mareykanka ay ka gaystaan deegaannada Al-Shabaab ay joogaan, waxaana uu sheegay duqeymahaasi in lagu dilay dad badan oo carruur ay ku jiraan.
Wararka kale ee Maanta oo Xiiso Leh halkan si sii Akhri.